Vamwe Vari Kunze kweNyika Vorambawo maBond Note
Mari yema bond note
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvabatana nevamwe vari kumusha vari kuramba kutambira kushandiswa kwema bond note, ayo akaparurwa nebhanga guru renyika reRBZ nemusi weMuvhuro.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvabatana nevamwe vari kumusha vari kuramba kutambira kushandiswa kwema bond note, ayo akaparurwa nebhanga guru renyika reReserve bank of Zimbabwe, RBZ, nemusi weMuvhuro.
Vamwe vevari kutsutsumwa nedanho rehurumende iri zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain, izvo zvinonzi zviri kuronga kuratidzira nemusi weMugovera munyika iyi zvichitsigira vari kumusha vari kuramba kutambira mari itsva iyi.
Mumwe wevari kuronga kuratidzira uku, VaSimbarashe Mutero, vanove sachigaro wevechidiki vebato reMDC T kuSouth East London, vanoti varonga kutora danho iri nekuona kuomesa musoro kwehurumende nekuenderera mberi nekuparura mari iyi.
Vanoti kunyange hazvo vana veZimbabwe vari kuramba mari iyi, hurumende yakaisa zvimiti munzeve.
VaMutero vanoti mamwe masangano anosanganisira reZim Vigil, Restoration of Human Rights Zimbabwe, Tajamuka, This Flag ndemamwe ane nhengo dzichange dziri pakuratidzira kweMugovera uku.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kuramba kutambira mari iyi zviri muAmerica zvinosanganisira sachigaro weMDC T mudunhu reAmerica, VaDen Moyo, pamwe nemurongi wemisangano mubato iri muAmerica, Doctor Muzi Ncube, avo vanoti bato reZanu PF riri kutsvaga nzira dzekuunganidza nadzo mari yekunze richitorera veruzhinji.
Vanoti hurongwa hwekuti kana munhu ari kunze akatumira mari kumusha anopiwa mubairo hahuna musoro sezvo munhu uyu achizopiwa mari iyi iri muma bond note, kwete yekuAmerica kana kuBritain inenge yatumirwa nehama dzake.
Vamwe vataurawo neStudio 7 vari kuSouth Africa neBotswana vashorawo hurongwa hwekuparurwa kwemari itsva iyi kunyange hazvo paramende isati yapedza kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pema bond note.
Hurukuro naVaSimbarashe Mutero